သူ့နှလုံးသားအစစ်အမှန်ကို လိုချင် ရင် ကိုယ့်နှလုံးသားအစစ်အမှန် လည်း ပေးတက်ဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ – XB Media Myanmar
သူ့နှလုံးသားအစစ်အမှန်ကို လိုချင် ရင် ကိုယ့်နှလုံးသားအစစ်အမှန် လည်း ပေးတက်ဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ
သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ အေးမွတျသူ ဟာဆိုရငျ သရုပျဆောငျမှု အပိုငျးမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပျဆောငျကှကျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဖြောျဖွတေငျဆငျေ ပး ခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခစြျခငျမှုမြားစှာကို ရရှိထား ခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခစြျခငျမှုမြားစှာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အေးမွတျသူ ရဲ့ ပှဲတကျ ပုံရိပျကလေးတှကေို ဖောျပွပေးလိုကျပါတယျနောျ။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးမြတ်သူက “အခမ်းနားဆုံးမတေမေတ္တာ ” Red Carpet Show ကို လူငယ်ဆန်တဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တာပါ။
အေးမွတျသူ က ” အခမျးနားဆုံးမတေ်တာ” တကယျ့ကိုစိတျကူးယဉျခငြျစရာလေး…. .စ/ဆုံးကွ ညျ့ပွီး သိလိုကျတာက …..မိနျးမတယောကျကို ပတျဝနျးကငြျနဲ့ … ဆှဲဆောငျလို့ မရဘူးမိနျးမတေ ယာကျ ကို နှလုံးသားနဲ့ ဆှဲဆောငျ ပါ….သူ့နှလုံးသားအစဈအမှနျကို လိုခငြျရငျ ကိုယျ့နှလုံး သားအစဈအမှနျလညျး ပေးတကျဖို့ လိုတယျ ။ မိနျးမတယောကျ ရဲ့ အတောငျးတဆုံး က သူခစြျတဲ့ အ မြိုးသားရဲ့ ရငျထဲက ခံစားမှု့ နဲ့ ပွောတဲ့ ခစြျတယျ….🖤🖤🖤 ဆိုတဲ့ စကားလုံးေ ပါလောကမှာ မိနျးမ၂မြိုး ဘဲရှိတယျ 🖤🖤🖤🖤 ပိုကျဆံမကျတဲ့ မိနျးမ ရယျ ပိုကျဆံရှိတဲ့ေ ယာ ကြားကို မကျတဲ့ မိနျးမရယျ ..အခမျးနားဆုံး မတေ်တာ⭐⭐ မမွတျလေး ကတော့ …. ….🖤🖤🖤ပိုကျဆံမတျတဲ့ မိနျးမဖွဈခငြျတယျ🖤🖤🖤ခစြျရသူတို့ရော…..????????????🙏🙏🙏🙏🙏” ဆိုပွီးသူမရဲ့ ဖေ့ဈဘှတျပေါျမှာ ရေးထားပါတယျ။
အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Source;aye myat thu,Reference&Credit:momolay.com
တခြားကလေးအမေတွေလို မလှဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
အာမခံပေး မပေး လာမယ့်ရုံးချိန်းမှာ အမိန့်ချမည်